Friday 9th March 2018 10:25:59 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Aqoonyahanada shisheeyaha ah ee farta Laatiinka u adeegsan jirey qoraalka af Soomaalig waxay kala ahaayeen Ingiriis, Talyaani, Jarmal, Aawstiryaan iyo Faransiis. Bilowga abaaraha sannadkii 1887, Dhamme J. S. King oo Ingiriis ay dhalashadiisu tahay ayaa waxaa uu arkay dhibaatada qoraal la'aanta af soomaaliga haysata. Kedib aqoonyahanadii ka dambeeyey waxay kala ahaayeen: Mario Maino, Enrico Cerulli, Martino Moreno, Bruno Panza ( oo Talyaani ah); C.R.V. Bell, Liliad E. Armstrong, I.M.Lewis, B.W.Andrzejewiski, John Drysdale (oo Ingiriis ah); aqoonyahanada Jarmalka waxaa ka mid ahaa A. Klingnheben iyo Carl Lang iyo Reinisch Austrian. Waxaa beryo dambe ku soo biirey Maraykanka oo Barnaamijkii Peace Corps ahaa darteed ku xiiseyey qoraalka far Soomaaliga (Joseph Pia, Jeanne contini iyo Dr. Castagno).
Beryo dambe ayey dad Soomaali ah door bideen in farta Laatiinka loo isticmaalo qoraalka af Soomaaliga: Dadkaas waxaa ka mid ahaa (Marwo) Xaliimo Maxamed Cali, Cabdi Kheyre Cawaate, Cabdulaahi Xaaji Maxamed, Muuse Galaal iyo Shire Jaamac Axmed. Dadkaas doodoodu waxay ku salleysneyd faa'iidooyinka xaga farsamada iyo macquulnimada.
Guddigii Luuqada ee 1961 kii Bishii Luuliyo 1 deedii 1960 kii ay labadii gobol ee Soomaaliyeed middoobeen, waqooyiga oo uu Ingiriisigu gumeysan jirey iyo kooonfur oo uu Talyaanigu gumeysan jirey. Middowgaas ay labada gobol isku darsameen waxay keentay in dhibaatooyin badan oo ku saabsan qoraal la'aanta far Soomaaliga lala kulmo. Sababtoo ah labada gobol waxay ku kala duwanaayeen xaga maamulka iyo waxbarashadda, kuwaas oo kala ahaa Ingiriis iyo Talyaani. Dhawr bilood markii xoriyada la haystay ayey Golihii Shacabku ka codsadeen dawlad inay guddi ka baaraandegga sidii af Soomaaliga loo qori lahaa sameeyaan, kedina wixii talooyin ah dawlada u soo gudbiyaan.
Qaar ka mid ah Soomaalidu waxay ku doodayeen in raggaas xubnaha guddiga ka mid ah aysan ahayn raggii ku habboonaa inay go'aan ka gaadhaan farta qaranka ee Soomaalida. Dadkaas waxaa ka mid ahaa Yaasiin Cusmaan Kenadiid (wiilkii ninkii farta Cusmaaniyada allifey) oo mar dambe yidhi:"xubanaha guddigani qoddobadii laga doodey mid qudha kuma aysan heshiinin. Qaarkood arrinta ayeysan daacad ka ahayn, qaarkoodna arrin suufinimo darteed oo ay sabab u tahay iyagoon si wacan ula socon dooda la soo hordhigey (Yasin, 1967)
Ganacsadaha Caanka Ah Ee Aadan Baradho Oo Ka Warbixiyay Halka Uu Marayo Dhoofka Xoolaha Somaliland [Daawo Muuqaal:-]